मुद्दा मामिला गर्दै हिँडेका बैंक र बैंकर बिरुद्ध फेरि मर्जरको डण्डा - Aathikbazarnews.com मुद्दा मामिला गर्दै हिँडेका बैंक र बैंकर बिरुद्ध फेरि मर्जरको डण्डा -
मुद्दा मामिला गर्दै हिँडेका बैंक र बैंकर बिरुद्ध फेरि मर्जरको डण्डा
मर्जरको पाटो चटक्कै बिर्सिएर राष्ट्र बैंकका पछिल्ला निर्देशन बिरुद्ध मुद्दा मामिलामा पुगेका बैंकहरुसंग आक्रोशित राष्ट्र बैंकले मर्जर गर्न फेरी २८ वाणिज्य बैंकहरुलाई ताकेता शुरु गरेको छ भन्दा पत्याउन गाह्रँे होला । तर, यो सत्य हो ।
नियमक निकाय राष्ट्र बैंकका निर्देशन बिरुद्ध मुद्दा मामिलामा गएर आफ्नो पद सुरक्षित गरेका केही सीइओ र दर्जनौ सञ्चालक बिरुद्ध राष्ट्र बैंक कडा रुपमा अगाडी आउने संकेत देखापर्न थालेको छ ।
गर्भनर डा. चिरनजीवी नेपालले भनेः– अहिले बैंकहरुको एटिएमबाट पैसा चोरी भएको छ । यसमा पनि बैंकहरुकै कमजोरी देखिन्छ । पैसाको रक्षा गर्ने काम बैंकको हो कि होइन ?
उनीले थपेः– निर्देशन बिरुद्ध मुद्दा मामिला गर्नेहरुले पैसाको सुरक्षा गर्न सक्नुपर्दछ । दोष अरुलाई देखाएर बैंकहरुले पन्छिन पाउदैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको प्रतिबद्धता मागेर मौद्रिक नीति मार्फत प्रोत्साहन गर्ने दर्जनौ सुविधा दिएको थियो ।
तर, अहिले बैंकहरु मर्जरमा आउन अटेर गरिरहेका छन् । यो नियम निकायलाई हेप्ने र निर्देशनको पालना नगर्ने परम्परा हो भन्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
उच्च स्रोत भन्दछः– आफैले मर्जर गर्दछौं भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, प्रगति विवरण नपठाउने, मुद्धा मामिला गर्ने अनि ठूला कुरा गर्ने । यो कस्तो बैकिङ्ग हो । २२ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मर्जर गर्दछौ भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । जसमध्ये जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले मात्रै मर्जरको पहिलो सम्झौता गरि राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छन् ।
राष्ट्रबैंकको नियमन विभागले सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई गत बिहीबार ‘सर्कुलर’ पठाउँदै अबको ७ दिनभित्र मर्जरको स्पष्ट कार्ययोजना पेश गरिसक्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले आर्थिक बजार न्यूजडटकमसंग बताए ।
उनीले भनेः– राष्ट्रबैंकले यसअघि मागेअनुसार मर्जरको प्रतिबद्धता पेश गर्ने बैंकहरुलाई ७ दिनभित्र सम्भावित मर्जर पार्टनरसहितको स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्न भनेको छ ।
अहिलेसम्म पनि मर्जरका लागि प्रतिबद्धता नपठाएका बैंकहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्दै ७ दिनभित्रै जवाफ पठाउन र मर्जरका लागि प्रष्ट कार्ययोजना बनाई लिखित रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
उच्च स्रोत भन्दछः– अब पनि मर्जर कार्ययोजना पेश नगर्ने वा प्रतिबद्धता नपठाउने बैंकहरुको नामै तोकेर फोर्स मर्जरमा लैजाने प्रस्टै योजना छ । राष्ट्रबैंकलाई अटेर गर्ने बैंकहरुले ‘फोर्स मर्जर’का लागि तयार भएर बसे हुन्छ ।
राष्ट्रबैंकले दिएको पछिल्लो निर्देशनमा संसोधन हुनुपर्ने माग गर्दै नेपाल बैंकर्स संघ र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अधिकारीहरुले मन्त्रालय तहसम्मै लविङ गर्न थालेपछि पछिल्लो समय गभर्नर डा. नेपाल बैंकर प्रति आक्रोशित छन् । उनले आफ्नो बहिर्गमन हुने बेलासम्म मर्जरको नीति जुनसुकै हालतमा सफल गराएरै छाड्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । गर्भनर डा. नेपालको रणनीतिका कारण पछिल्लो समय राष्ट्रबैंक पुनः मर्जरको वातावरण बनाउन तातेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
राष्ट्रबैंकले एकाएक ७ दिने अल्टिमेटमसहित सर्कुलर पठाएपछि बैंकका संचालक र सीइओहरु पुनः तनावमा देखिएका छन् । उनीहरु रातदिन नभनी संभावित मर्जर पार्टनर खोज्न व्यस्त रहेको देखिन्छ ।
२८ वाणिज्य बैंक र केही विकास बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजान जे जस्तो कदम चाल्न पनि राष्ट्र बैंक तयार देखिएको छ । राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहदा रहदै नियमक निकाय बिरुद्ध मुद्दा मामिला गर्ने र जीवनभरी जागिर खानेहरुलेनै मर्जरको प्रतिबद्धता दिएका हुन् । के हो प्रतिबद्धता पूरा गर्नु पर्दछ कि पर्दैन । राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गर्भनरले आक्रोशित हुँदै बताए ।
अधिकाशं वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा माथी, डेपुटी गर्भनरद्वयले बैंकरलाई दिए चेतावनी
मेट्रोमा राज गर्न नपाएपछि जिल्ला ताकेका एसपी राना परे थचक्क
चालु खाता १ अर्ब २३ करोड मात्रै बचत
सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्द बैंकका कर्मचारीको सडक आन्दोलन (फोटोफिचर)
अब घर घरमै स्वास्थ्य परिक्षण हुने, सजिलो मेडसले शुरु गर्यो यस्तो सेवा
नबिल बैंकको सुदूरपश्चिममा उद्यमशीलता विकाश तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
कामना सेवा र रेमिट टु नेपाल बिच रेमिट्यान्स सम्झौता ।
१२ जिल्लाकै नागरिकलाई सहज हुने गरी प्रदेशको केन्द्र तोक्न सफल भयौँ : मुख्यमन्त्री पोखरेल